galmudugnews.com » Guusha Xidigaha cusub ee Galmudug iyo dareenka bulshada
Home » WARARKA » Guusha Xidigaha cusub ee Galmudug iyo dareenka bulshada Guusha Xidigaha cusub ee Galmudug iyo dareenka bulshada galmudug on
Sep 21st, 2011 //
No Comment Views 163946
Galmudugnews.com Laba bil gudaheed ayey isbedel horumar weyn xambaarsan ku tilaabsadeen Xukumadda cusub ee maamul goboleedka Galmudug.
Inkastoo horumarka Galmudug hareeyay ee dhinaca diblomaasiyadda iyo siyaasadda ay gacan ka geysteen bulshada ku abtirsata Galmudug hadana Ciyaartooyda kubadda sida wanaagsan u ciyaaray waxaa ka mida Laacibiinta kala ah:
1-	Wasiirka Xiriirka Caalamka Mohamed Ali Nur
2-	Wasiirka Kaluumeeysiga Hassan Samatar Gacaliye
3-	Wasiirka Maaliyadda Abdullahi Jamac Shire
4-	Wasiirka Caafimaadka Dr Hussein Sheekh Nuur
Afartaan Wasiir waxay isbedel weyn ku sameeyeen Galmudug.
Waxay ku guuleeysteen in shirkii wadatashiga Somalia la siiyo Galmudug tiro la mida tii la siiyay Puntland.
Waxay ku guuleeysteen dhaqaalaha la siiyo Somaliland iyo Puntland miisaaniyad la mida in Xukumadda Mareykanka siiso Galmudug taas oo socon doonta shan sanadood ,dhana 57000$
Waxay ku guuleeysteen in Xukumadda Somalia laga saxiixo heshiis nuxurkiisu yahay in Galmudug la siiyo miisaaniyada ay ku leedahay deeqaha Caalamka iyo gunada maamul goboleedyadda.
Waxay ku hoowlan yihiin sidii beelaha dega Mudug iyo Galgaduud looga iibin lahaa inay taageeraan qadiyadda Galmudug sida beesha Cadaado iyo tan Guriceel.
Waxay ku hoowlan yihiin in gogol nabadeed ay dhigaan Bandiiradleey si hogaamiyeyaasha dhaqanka,siyaasadda ,diinta ,dhalinyarada iyo gaashaandhiga beelaha Galmudug loo heshiisiiyo.
Bulshada ku abtirsata Galmudug ayaa u riyaaqday habka hoowlkarnimada leh ee guulaha waaweyn ay ugu tilaabsatay Xukumadda cusub ee Galmudug.
Isbedelka cusub ee Galmudug iyo hoowlkarnimada Wasiiradda waxay meesha ka saartay kibir qooqii fadhiidnimada ku dhisnaa ee lagu yaqiin shaqsiyaadkii loogu yeeri jiray magacyada Baasto iyo bariis kuwaas oo aaminsanaa inay xilalka u hayaan jufooyinkooda,lagana qaadi Karin.
Sida muuqato Maamulka Galmudug wuxuu diyaar garoow ugu jiraa sidii loo dooran lahaa hogaan sare ,iyadoo awood qeybsigana laga dhigi doono mid cadaalad ku dhisan .
Beelaha ugu daacadsan Galmudug sida Saruur iyo Shiikhaal ayaan saami u qalma laga siin kuraasta ugu muhiimsan Maamul goboleedka Galmudug.
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21021 hitsContact US - 19681 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 15795 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 15508 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 13964 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 13923 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 13832 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 13760 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 11839 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11804 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 11753 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11539 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11510 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11367 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11275 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11173 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11092 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11066 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 10895 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 10540 hitsKhaliif weyne oo Qaar ka mida beelaha Sacad caayay- Yaab - 10381 hitsWarar yahanka kooxda Realmadrid Cristiano Ronaldo oo jebiyay rikoorka gool dhalinta Horyaalka Spain - 10365 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 10074 hitsXaaskii Adan Xaashi Ceyrow oo joogta Pakistan. - 10036 hitsDaawo xiisadii ka dhalatay heshiiskii Ankara oo cirka isku shareertay -Wasiirkii Khaarijiga TFG oo cambaareeyay - 9795 hits Home About